ရှင်ပေါလု Biya အားဖြင့်ခေါ်ယူရန်းအမျိုးသားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး: အဲဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကနာရီအနည်းငယ်အတွင်းလူသိများလိမ့်မည်တရားဝင် positon - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » Autres ရှင်ပေါလု Biya အားဖြင့်ခေါ်ယူ "ဂရန်းအမျိုးသားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး: အဲဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကနာရီအနည်းငယ်အတွင်းလူသိများလိမ့်မည်တရားဝင် positon
ရှင်ပေါလု Biya အားဖြင့်ခေါ်ယူရန်းအမျိုးသားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး: အဲဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကနာရီအနည်းငယ်အတွင်းလူသိများလိမ့်မည်တရားဝင် positon
Tele RELAY တစ်ခု 12 စက်တင်ဘာလ 2019
«အများပြည်သူတစ်ဦးက Grand အမျိုးသားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး၏ကြေညာချက်အပေါ်မဟာမိတ်အဲဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေက & မဟာမိတ်တရားဝင်အနေအထားယနေ့လူသိရှင်ကြားမည်။ အကြောင်းကြားဖြစ်ပါတယ် ရမညျ related ရေးသားထားသောဆက်သွယ်ရေးဟာအဲဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကအမျိုးသားဒုတိယသမ္မတမစ္စ B ကို Tiriane နောဧ "၏လက်ဖြင့်လက်မှတ်ရေးထိုးခံရကြလိမ့်မည်, ထို Judy 12 စက်တင်ဘာလပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်မှ Maurice Kamto Olivier Bibou Nissack ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည်ပေါလု Biya အင်္ဂါနေ့ 10 စက်တင်ဘာလ "Ambazonia" ဟုခေါ်နေတဲ့သမ်မတနိုငျငံဖန်တီးချင်သူကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့်ခွဲထွက်ရေးအုပ်စုများအကြားသွေးထွက်သံယိုပဋိပက္ခတခုတခုအပေါ်မှာကျယ်ပြန့်အမျိုးသားရေးတိုင်ပင်ဆွေးနွေး၏ဤလကုန်မှာကျင်းပကြေညာခဲ့သည်။
« ငါဒီလကုန်အားဖြင့်ကျင်းပရမည်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကို ( ... ) အနောက်မြောက်နှင့်အနောက်တောင်ပိုင်းလူဦးရေ၏မျှော်မှန်းချက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်နည်းလမ်းများနှင့်နည်းလမ်းဆန်းစစ်ဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုကြီးမားသောအမျိုးသားရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီပေမယ့် လည်းအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ Nation ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများ "သူ၏မြင့်မားသောမျှော်လင့်လိပ်စာအတွက်ပြည်နယ်၏ဦးခေါငျး Said
ကုလသမဂ္ဂအန်တိုနီယို Guterres ၏အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကကြိုဆိုအနေနဲ့ကြေငြာချက်, အဘယ်သူသည် "လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအားလုံးပါဝင်နိုင်ခြင်းနှင့်တိုင်းပြည်နှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်စိန်ခေါ်မှုများမှတုံ့ပြန်မှုကြောင်းသေချာစေရန်ကင်မရွန်း၏အစိုးရကိုအားပေး".
အဆိုပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဝန်ကြီးချုပ်, ယောသပ် Dion Ngute ကသဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်လျက်, ကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များအဖြစ်လက်နက်ကိုင်အုပ်စုများ၏ကိုယ်စားလှယ်များအပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောလူမှုရေးအစိတ်အပိုင်းများကိုအတူတကွဆောင်ကြဉ်းပါလိမ့်မည်, ပေါလု Biya စိတ်ချပါ။
အချို့သောနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များကကြိုဆိုတစ်ဦးကအပြောင်းအရွေ့, Cabral "Libii ကဲ့သို့ဖြစ်၏ ကကြိုးနှံစှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပါအဝင်မျိုးစုံကစားသမားအားဖြင့်ခေါ်တော်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည် "နောက်ဆုံးသမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဆုံးရှုံးကိုယ်စားလှယ်လောင်းပြန်ကြားခဲ့သည်။ ယောရှုသည် Osih SDF များအတွက်တူညီပုံပြင် " အားလုံးကင်မရွန်း, ချွင်းချက်မပါဘဲ, တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးခေါ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ထားပြီး ဒီသမ္မတရွေးကောက်ပွဲကြေညာချက်ထဲမှာ exulted ထားတဲ့ "Adji Garga ဟာမန်သို့မဟုတျ, ADD ၏အမျိုးသားနိုင်ငံတော်သမ္မတ), ။ " လူတိုင်းဤအခြေအနေများ၏လက်တွေ့ဘဝသိမ်းယူရန်အဘို့အဒါဟာလုံးဝလိုအပ် "ဟုသူကပြောသည်။
သက်ဆိုင်သူများ 2030 အားဖြင့်မိခင်မှကလေးသို့-ဂီယာဖျက်သိမ်းရေးငုံ့နေကြ
Fally Ipupa ဟဲလိုဏရေနံ ketchup Nana mask? - ဗွီဒီယို
PHOTO ။ Camille Lacourt ကိုချစ်: သူ့ဇနီးကသူ့ကိုလှပတဲ့ကြေညာချက်ကိုဖန်ဆင်း
ပြင်းထန်သော Meghan Markle: အ Duchess ကယ့်ကိုမကျေမနပ် & # 039; မိမိအချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအလုပ် exploit မှလိမ်လည်မှုထိတ်လန့်
အိန္ဒိယ: အိန္ဒိယ Zakir Naik ၏သတ်မှုများလျော့ချသည့်အပေါ်အရေးဆိုမှုမဟာသီယာမိုဟာမက်ပယ်ချ | အိန္ဒိယသတင်း
Horoscope 02 မေလ 2019 - ဗွီဒီယို
ကင်မရွန်း - ဂျော့ဘ်228
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်4,575